छाउपडीविरुद्ध विद्यार्थी जागरण - अन्तर्वार्ता - नारी
छाउपडीविरुद्ध विद्यार्थी जागरण
विद्यार्थी नेताहरूको एउटा टोली गत महिना अछाम तथा दैलेखका ग्रामीण बस्तीमा पुगी ‘छाउगोठ’ को दु:ख हेरेर फर्किएको छ । यही प्रसंगमा विद्यार्थी नेतृ नविना लामासँग गरिएको कुराकानी :
छाउपडीविरुद्धको पछिल्लो अभियान के हो ?
महिनावारी प्राकृतिक धर्म हो, तर त्यसलाई पाप मानेर छाउगोठमा बस्नुपर्ने अवस्था पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक कुप्रथा हो । त्यसरी बस्दा निरन्तर थुप्रै महिलाको ज्यान गैरहेको छ । किशोरीहरू असुरक्षित भएका छन् । महिलाहरूले सहँदै आएको पीडा बुझेरै हामीले यो कुप्रथाविरुद्ध अभियान सुरु गरेका हौं । युवा–विद्यार्थीहरूले केही नगरे छाउपडीप्रथा अझै वर्षांै कायम रहने देखियो ।
छाउपडी गोठमा के देख्नुभयो ?
हामीले त्यहाँ महिनावारी भएर छाउगोठमै बसेका महिलाहरूसँग भेटघाट गर्‍यौं । उनीहरूले छाउ बार्नुको पीडा सुनाए । २१ औं शताब्दीमा पनि पशु र महिलाको समान स्थान देखेर असह्य पीडा भयो । त्यो देखेर निकै दु:ख पनि लाग्यो । म त द्रवित नै भएँ ।
तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
म जनजाति समुदायकी छोरी, सुन्दै नौलो लाग्यो । वृद्ध आमाहरू आफैं महिनावारी हुनुलाई पाप मान्दा रहेछन् । यो पापलाई आरामले होइन, कष्टपूर्वक पखाल्नुपर्छ भन्ने अन्धविश्वास रहेछ । १३ दिनसम्म छाउगोठमा सुत्ने आमाहरू पनि भेटिए । देउता रिसाए घर बिग्रन्छ भन्ने ठूलो त्रास रहेछ । विद्यालयका शिक्षिका, नेता एवं जनप्रतिनिधिहरूकै घरमा त्यस्तो कुप्रथा निर्वाध रूपमा चलिरहेको देखियो ।
खास समस्या के पाउनुभयो ?
सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट वर्षांैदेखि विभिन्न अभियान चलाइएका छन् । छाउप्रथाविरुद्ध कार्यक्रमहरू पनि हुँदा रहेछन्, तर व्यवहारमा जस्ताको तस्तै ।
विद्यार्थी संगठनहरूले नियमित राजनीतिबाहेक सामाजिक अभियानमा समेत हातेमालो गरेको देखियो । यसरी सामाजिक कुरीतिविरुद्ध एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा कसरी महसुस भयो ?
विद्यार्थीहरू सधैं लड्छन्–भिड्छन् भन्ने मात्र बुझ्नु भएन । विद्यार्थी संगठनले मिलेर धेरै राजनीतिक एवं सामाजिक काम पनि गरेका छन् । मूल्य वृद्धि, शुल्क वृद्धि तथा सवारी भाडामा छुटका धेरै आन्दोलनमा हामी सँगै छौं । किशोरी विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य र भविष्यसँग जोडिएको छाउपडी विरुद्धको अभियान धेरै अघि नै सञ्चालन गरिनुपथ्र्यो । ढिलै भए पनि राम्रो कामको थालनी भएको छ ।
यो मुद्दामा विद्यार्थी संगठनहरूले अब के गर्छन् ?
छाउपडी प्रथा गैरकानुनी छ । अघिल्लो संसद्ले त्यसविरुद्ध कानुनसमेत बनाएको छ । तैपनि पश्चिमी पहाडका महिलाहरू एउटा ठूलो अन्याय र अमानवीय भेदभाव सहेर बसिरहेका छन् । यो मूलत: सामाजिक समस्या हो । व्यापक जनचेतना फैलाएर यसलाई घर–घरबाटै अन्त्य गरिनुपर्छ ।
यो समस्याको दिगो समाधान कसरी गर्न सकिएला ?
कतै छाउगोठ भत्काइएका पनि रहेछन् । तैपनि छोरीहरू महिनावारी हुँदा घरभित्र निर्धक्क सुत्ने स्थिति बनिसकेको छैन । त्यसैले मनोविज्ञानमै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने खाँचो छ । त्यो काम विद्यार्थी संगठनका सदस्यहरूबाटै सम्भव छ । समुदायलाई मनैदेखि कन्भिन्स गर्ने गरी चेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले प्रदेश नम्बर ६ र ७ का विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै समावेश गरेर छाउप्रथाविरुद्ध जनचेतना जगाउनुपर्ने माग गरेका छौं । यसमा प्रदेश सरकार नै अगाडि आउनुपर्छ । छाउपडी मान्न बाध्य तुल्याउनेहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।
पुस २३, २०७४ - विद्यार्थीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने ?
श्रावण १, २०७४ - हल्लाले कसिलो बनाएको जोडी
वैशाख ७, २०७४ - विद्यार्थी एवं अभिभावकका लागि
असार २९, २०७३ - युमि स्कुललाई जापानी मोडलको उपहार
निरोगी रहन जीवनशैली परिवर्तन जरुरी पुस २, २०७८
‘महिलालाई जिम्मेदारी बराबरी’ मंसिर ३, २०७८
‘महिलालाई आरक्षण आवश्यक छैन’ कार्तिक २, २०७८
‘जीवनमा संघर्ष अनिवार्य’ आश्विन १, २०७८
‘महिला शिक्षामा जोड दिनुपर्छ’ भाद्र २, २०७८
‘एयरोस्पेस आकाशदेखि जमिनसम्म उपयोगी’ श्रावण ४, २०७८